के हो यार, अख्तियार ! « Gajureal
प्रकाशित मिति: १७ असार २०७३, शुक्रबार १०:१४
सोझै ‘भ्रष्टाचार शुन्यकरण आयोग’ भने पुग्नेमा यति ला…मो ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ किन राख्नु पऱ्या होला ? एक त मान्छेलाई लम्बाचौडा पढ्ने फुर्सद छैन, त्यसमाथी त्यति लामो नाम संझनै गाह्रो हुन्छ । सायद, यो संस्था ‘अख्तियार’मात्रै भनेर चिनिनु र जानिनुको कारणपनि यही होला ।
आम मानिसमा फेरी प्रश्न उठ्न सक्छ, यो ‘अख्तियार’ भनेको के होला ? मानिस नै आम भएपनि कल्पनापनि सामान्य नै हुने भयो । लाग्दो हो, ‘अख्ती’ नामको कुनै भुमिगत ब्यक्तिको ‘यार’ पो हो कि ! सोझा जनताले त कि नामबाट चिन्ने हो, कि त कामबाट चिन्ने हो । मपनि हिजोसम्म यस्तो ठान्दथें, जहाँ भ्रष्टाचार छ, ‘आँखाले त्यहीं हेर्’ भनियो होला ! कालान्तरमा ‘आंखा त्यहीं हेर्’ वाक्य अपभ्रंस हुंदै ‘आंखा तिं हेर्’बाट ‘अख्तियार’ रहन गएको होला !
किन भने, यसो बुझेर ल्याउंदा थियो पनि त्यस्तै ! अख्तियार भन्नासाथ भ्रष्टाचारीहरुको सातो जांदै थियो । अपराधीहरुको पुत्लो उड्दै थियो । तस्करको लस्कर पक्राउ खांदैथियो । बेईमानको बाह्र बज्दै थियो । ईमानको इज्जत बढ्दै थियो । तर जब डा. गोबिन्द केसी मानसिक बिरामी भएकोले ओखती गर्नु पर्ने बक्तब्य निक्लियो तब यो गजुरीयल बिश्लेषकपनि कन्फ्युज बन्न पुग्यो, यो अख्तियार हो कि ‘ओखती यार’ हो !
ओखती यार अर्थात् औषधी गर्ने साथी । डा.केसीको केशमा त अख्तियारले साथीभन्दापनि माथीको कुरा गऱ्यो । एउटा डाक्टरलाई मानसिक रोगीको घोषणा गर्न सक्नेहरु झन् ठूला डाक्टर हुनुपर्छ ! एउटा नागरिकलाई सरकारी तवरबाटै मानसिक रोगीको घोषणा गर्नु गराउनु सानो डाक्टरले गर्ने कुरो हैन । कुन सदाचारको कुरा रहेछ, पत्ता लगाउन पाए हुन्थ्यो ।
एउटा संभावना थियो, समाजको रोग भ्रष्टाचार, शरीरको रोग मन । एउटा थियो, अख्तियार, अर्को थिए, गोविन्दकेसी । यी दुई मिलेर शरीर समाजको रोग निको पार्ने संभावना थियो । तर, डाक्टर गोबिन्द केसी–अख्तियार जुहारीपछि यो संभावनापनि टरेको छ । डाक्टर अनसन बसेरै छोड्ने, अख्तियार उनलाई गलत देखाएरै छोड्ने ! यस्तो भएपछि देश र दुनियाको रोग कसरी निको होला र ! को सही, को गलत समयमै पत्ता लगाउन सकिएन भने हामी सबै मानसिक रोगी घोषित हुने गजुरीयल ठम्याई छ ।
डाक्टर केसी कुनै भ्रष्टाचारी भएका भएर उनको पछि हजारौं मानिस लाग्दैन थिए होला । अख्तियार उनिमाथी खनिएको छ । डाक्टर केसीलाई मानसिक रोगी भएको बक्तब्य निकालेपछि त खनिएकोमात्र हैन, उठाउनै गाह्रो हुनेगरी पोखिएको छ । यसलाई उठाउन कसो पो गर्ने होला !
अख्तियारले डा.गोविन्द केसीलाई मानसिक रोगी भनेपछि मेरो मनमा आधा दर्जन प्रश्न एकै पटक ओईरिएकाछ् । डा. केसी कैले बिरामी जांच्दै भेटिन्छन् । कैले अनसन बस्दै देखिन्छन् । कैले अभियानमा जारी हुन्छन् । पछिल्लो समयमा अख्तियारका यारहरुलाई महा अभियोग लगाउन माग गर्दै भेटिए । डा. केसीलाई डा.अनसन केसी भनेर ठट्टामा उडाउन सकिएला तर रोगी नै घोषणा गर्दा भोली मुद्धै हाल्नेहरु निस्किए भने तिनलाई कुन रोगीको संज्ञा दिने त ?
यता अख्तियारका मूल गियर लोकमान सिंह कार्कीपनि कम चर्चित थिएनन् । बिगतको ईतिहास कालो भएपनि बर्तमानमा लोकमानको नाम कम थिएन । कालो काम गर्नेहरुलाई जालमा पारेर चर्चित भएका उनलाई जनताले ठिकै गरेछौ भन्न थालि सकेका थिए । तर केसी काण्डपछि उनका फ्यानमात्र हैन, एसीहरुपनि रनभूल्लमा परेकाछन्, हैन, कुरोको चुरो के हो भन्दै ।